Fontbase, rakanakisa font maneja wevagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Kune avo vakazvipira kuna graphic design, kana kune avo vanongoda kusiya madhesiki avo aine akanakisa ekugadzira, chimwe chezvinhu zvekutanga kufunga nezvazvo mafonti kana mafonti. Uye ichi chinhu icho GNU / Linux haina kunge iine sarudzo dzakawandisa munguva yakapfuura, kunyangwe rombo rakanaka maitiro acho achiratidzika kunge achidzosera kumashure nekusvetuka sezvakaratidzwa nematurusi eiyo maitiro fontbase, iyo yatichabata nayo nhasi.
Ndicho yemahara uye multiplatform app, ine inokwezva uye yakarongeka interface dhizaini iyo inopa kukurumidza uye nekukurumidza kushanda pamwe nekugadzikana kwakanyanya. Iwindo rayo guru rinotitaridza padivi repanzvimbo kubva patinogona tarisa mafonti ese ehurongwa uye patinokwanisa kuwana zvikamu zvitatu kana tabo, kwatinogona kutsvaga mafonti matsva kana kutanga kuronga nawo nenzira yatinofunga kuti iri nyore, kuti tikwanise kuibata nekukurumidza uye nyore.
Yekutanga yezvikamu izvi 'Ronga ', uko kwatinoona mafonti ayo atove chikamu cheedu system uyezve nekuronga edu anodikanwa, achiasimbisa iwo rimwe nerimwe kana muunganidzwa. Asi apa ndipo patinogona zvakare kumisikidza masosi, nekungowedzera iwo kufolda uye kusarudza iyo 'Activate' sarudzo, inowanikwa mu menyu yemamiriro. Mune iyo tebhu 'Unganidza' tinogona kutsvaga nekuisa mafonti kubva kune akati wandei emasevhisi akasiyana anopa mafonti, senge Google. Kune rimwe divi, mune yechitatu uye yekupedzisira yematepi aya, anonzi 'Kuwana', isu tinokwanisa kugamuchira zviziviso kana mafonti matsva achionekwa kutorwa kubva pawebhu
Fontbase iri, sekutaura kwatamboita pakutanga, chishandiso chemuplatform sezvo iine shanduro dzeLinux, Mac OS X neWindows, uye kurodha kwayo kunotora dzinosvika 54 MB kunyangwe pawebhusaiti isu chete tine package yeUbuntu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Fontbase, akanakisa font maneja wevagadziri
Mhoro, zvachose kure nemusoro wenyaya, ndeipi theme yeGTK yauri kushandisa mukutora ikoko?
Zvikuru, ndanga ndichitsvaga chishandiso chekubata mafonti kwenguva yakareba. Haisi maneja akazara kwazvo kana akakodzera (zvirinani pane zvandinotarisira), asi mukutsinhana pasina ...
Izvo hazvitauri kutaura kuti pane peji rekurodha, kunyangwe ivo vachipa package "yeUbuntu", iyo pasuru iri chaizvo AppImage, saka inofanira kushanda pane chero kugoverwa pasina dambudziko. Ndakaitora pasi ndikayedza zvinobudirira paManjaro KDE.